हामी शायद प्रत्येक मेरो जीवनमा एक पटक एक abstraction रूपमा यस्तो अवधारणा सामना गर्यो। यो अक्सर तपाईं एक सानो अलग वरिपरि कुराहरू मा एक नजर लिनुपर्छ गर्दा दैनिक जीवनमा लागू गरिएको छ। कसरी ठीक - "अन्यथा"? के यो द्वारा चाहनुभएको छ र के हो abstraction, बाहिर आंकडा प्रयास गर्नुहोस्।
यो अवधारणा ल्याटिन यसको जरा छ र रूपमा शाब्दिक अनुवाद "एक व्याकुलता।" अक्सर परिवर्तन मतलब पेशा वा गतिविधि र सोचाइ परिवर्तन सहित, विश्लेषण वस्तु असामान्य देखिन्छ गर्दा फरक कोण देखि, अन्य पक्ष बाट कुराहरू हेर्न क्षमता। यसरी, हाम्रो मन वस्तु बारेमा सबै अवस्थित विचार जडान र उहाँले व्यक्तिगत गुणहरू, लिंक, घटनाहरु छैन भने तिनलाई व्यवहार गर्नुहुन्छ। अन्ततः, को, नियमित स्पष्ट र आवश्यक सुविधाहरू एक निर्धारण छ वस्तु। एक के हो abstraction? यो estrangement वा एक अन्य देखि को जुदाई। वैकल्पिक पछि पहिचान छ। Abstraction, आफ्नो नयाँ गुण खोल्ने प्रारम्भिक स्तर, वा विपरित गर्न विषयमा प्रस्तुतीकरण फिर्ता, केही बिन्दुमा, अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक साघुँरो अर्थमा, abstraction को परिणाम मा, कि छ, कुनै पनि व्याकुलता को (परीक्षण) को सैद्धान्तिक विशेषताहरु एक सामान्यकरण छ।
एउटै वस्तुको एक फरक दृष्टिकोण
हरेक व्यक्ति आफ्नो जीवनमा केहि मानते। आफ्नो मन निर्णय वा एक विशेष विषयमा राय विकास गर्न, उदाहरणका लागि, जो मूल्य असर गर्छ सक्नुहुन्छ व्यक्तिगत तत्व, को लागि खोज, कारक को एक नम्बर विश्लेषण। abstraction को विधि द्वारा प्ले महत्वपूर्ण भूमिका को यस्तो बोध मा। आफ्नो लक्ष्य - विषयहरू अध्ययन गर्न जो, धारणा र सोच को सद्गुण द्वारा, एक पूर्ण हदसम्म महसुस गर्न सक्दैन धेरै ठूलो गुण हो, सम्बन्ध, संचार, छ गर्छन। cognition एक विश्वव्यापी विधि रूपमा, abstraction सुविधाहरू हाइलाइट गर्न मद्दत गर्छ। वस्तु बुझ्दा, एक व्यक्ति, यो सरल बनाउन, भूल गर्दा त्यो छ बाँकी उपेक्षा, एक खास हात ध्यान हकदार छ।
तपाईं यस्तो विश्लेषण, संश्लेषण, abstraction रूपमा अवधारणाहरु परिचित छन्? तिनीहरूले व्यापक यस्तो तर्क र दर्शन रूपमा क्षेत्रहरू प्रयोग गरिन्छ, प्रत्येक अन्य देखि अलग अवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ, तर ज्यादातर एक सम्बन्धमा छन्। यो संश्लेषण अर्थ अलग, disparate अवधारणाहरु संयोजन को एक प्रक्रिया; यसको उद्देश्य एकल एकाइ वा समूह तिनीहरूलाई मिश्रण छ। संश्लेषण - एक संज्ञानात्मक समारोह खेल्छ जो मानव चेतना को एक महत्वपूर्ण चरण। अर्को शब्दमा, केही भाग, संश्लेषण भएको र तिनीहरूलाई सङ्कलन गर्न गर्दछ।
यसको विपरीत, विश्लेषण यसको घटक भागमा अवस्थित एकाइ फुकाल्नु गर्न खोज्ने। सँगै दुई अवधारणाहरु संचार व्यक्तिगत तत्व बीच भइरहेको को विचार गर्न वृद्धि दिन अनुसन्धान वस्तुको।
दिन-को दिन मानव चेतना नयाँ घटक, वस्तु र अवधारणाहरु पहिले अध्ययन गर्न अप्रत्यक्ष abstraction मद्दत गर्छ के खोज्दैछ। विधि सिक्दै यस मामला मा जो अप नयाँ ज्ञान, विधि र अनुसन्धान समाधान, साथै डाटा सुधार को systematization खोल्न तरिका को एक सेट छ। यो निष्कर्ष, तर्क पूर्वानुमान को सिद्धान्त समावेश गर्नुपर्छ। त्यसैले, वस्तु देख, एक व्यक्ति अनुमान को फारम रूपमा सेवा कि hypotheses र सिद्धान्त राख्छ। पछि तिनीहरूले वैज्ञानिक प्रमाण, प्रयोग वा अतिरिक्त तथ्य भेला समर्थित गर्न सकिन्छ।
abstraction को विधि, तुलना प्रक्रिया मा विशिष्ट सुविधाहरू छ कसरी ज्ञान। विनियोजन गर्दा महत्वपूर्ण (निश्चय गरिदिने) प्रमाण यो abstraction एक गुणात्मक, मात्रात्मक पक्षबाट व्यक्त भएको छ। निर्णय लिन, व्यक्ति अक्सर तपाईं (आफ्नो) वास्तविक संग संकेतक हेर्न अनुमति दिने, तुलना को विधि मा आधारित छ। तराजू मा पछि अन्तिम विकल्प असर जो र बेफाइदा, राखे।
हाम्रो आन्तरिक संयन्त्र को cogs
यसैले, abstraction के हो? पक्कै, यो कहिले काँही पनि यसलाई साकार बिना, हामी प्रयोग जो एक जटिल संयन्त्र छ। मानसिक, मानिस सेट को व्यक्तिगत तत्व अलग, विद्यमान गैर-अस्तित्वहीन देखि अलग। यो प्रक्रिया एक श्रृंखला घटनाहरू एक श्रृंखला, वस्तुहरु को एक समूह हुन सक्छ। यसरी, विशिष्ट साधारण कि व्यक्तिगत लागू गुण abstracting सक्षम मानव मनोविज्ञान को व्यक्तिगत विशेषताहरु बताइरहेका। यो एक पटक फेरि एक सशक्त तर्क प्रमाणित गर्छ कि हरेक मानिस, आफ्नो मन र चेतना, अद्वितीय।
आवेदन - सबै भन्दा
वैज्ञानिक को विधि राजनीति, गणित र तर्क: abstraction धेरै क्षेत्रहरू प्रयोग गरिन्छ। हामी पहिले देखि नै abstraction को सामान्य अवधारणा अन्तर्गत सानो विवरण वा वस्तु नै प्रकृति हाइलाइट गर्न एक दृश्य संग बाह्य घटना बाट व्याकुलता खाल सिकेका छन्। कारण यस्तै, जन्म वैज्ञानिक अवधारणाहरु "भाग हेर्न" पालो साझा गुण र सम्बन्ध, श्रेणी मा संयुक्त छन् जो।
तसर्थ, वैज्ञानिक abstraction अर्थव्यवस्था मा लगाया जान सक्छ। संसारमा विभिन्न लाखौं छन् खाना को आइटम व्यक्ति लागि आवश्यक एक दैनिक आधार मा खपत र गैर-खाद्य समूह। तिनीहरू सबै विशेषताहरु र गुण को एक किसिम मा फरक। उत्पादनहरु बिक्री को लागि जस्तै सामान - तर तिनीहरूको अनन्त तुलना टाढा सार्दा, मान्छे involuntarily तिनीहरूलाई एक श्रेणी मा एकताबद्ध।
वैज्ञानिक abstraction निर्माण मा सजिलै देखिने। हरेक भवन खातामा भविष्यमा निर्माण को सुविधाहरू लिएर, एक विस्तृत गणना समावेश छ। तर सही geometrical पत्राचार, साथै यसका सबै घटक को सख्त अन्तरक्रिया, सधैं पूर्ण प्रकृतिका doable छन् - यो त छ गर्न असम्भव सैद्धांतिक वा किनभने अत्यधिक जटिलता को व्यावहारिक अस्वीकार्य। यस कारण, वैज्ञानिक abstraction को विधि प्रयोग गरेर schematization सुविधाहरु हुन्छ। भावी माध्यमिक कारक जो, बारी मा, गणना को शुद्धता र विश्वसनीयता कुनै प्रभाव छ, छोडिन्छ।
Abstracted सोचाइ - प्रत्येक व्यक्ति को क्षमता
मानसिक, वस्तु को गुण देखि जानिजानि व्याकुलता, त्यहाँ को एक नयाँ विचार वा एक तार्किक अवधारणा फारम भनेर - विषय को विचार संक्षेप, हामी अब केही भनेर यस्तो abstraction लागि थाहा छ।
दैनिक जीवनमा abstraction प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता जन्म देखि व्यक्तिमा निहित। थुप्रै तरिकामा ठूलो भूमिका भाषा कौशल को विकास र भाषा नै यहाँ प्ले छ। त्यसैले जब abstracted तरिका विचार "प्रवाह", चेतना वस्तु को व्यक्तिगत विशेषताहरु यसको सामान्य संकेतक (जस्तै "फल") वर्णन केन्द्रित छैन। को सार गर्न विरोध रूपमा, विज्ञान विशेष तर्क छ - यो मामला मा, को चेतना विस्तार थप गुण देख (केवल "फल", अर्थात् यो "सुन्तला" वा "मीठो-अमिलो स्याउ"), सीमा को समझ।
को द्वन्द्व के हो?
19 सरल सामाजिक कौशल: कसरी अरूलाई थप आकर्षक बन्न
, रचनात्मक तीव्र, विनाशकारी - यो बारेमा? निस्सन्देह, संघर्ष!
Pathetic मान्छे - यो राम्रो वा खराब छ? वाक्यांश को अर्थ
टबिलिसि समुद्र - Georgia मा गहिरो जलाशय: वर्णन, सुविधाहरू, अवकाश
कथा, अभिनेताहरु: फिल्म "द प्यासेन्जर" (2016) को समीक्षा
प्लास्टिक Windows "लैब्राडोर": समीक्षा। विन्डोज "लैब्राडोर": मूल्यहरु
मशरूम संग तरकारी स्ट्यु कसरी खाना पकाउनु
के pleural गुहा मा तरल पदार्थ भने: गराउनुहुन्छ र उपचार
दुई पाङ्ग्रेमा स्केटबोर्ड! जीवनको ताल महसुस!
फिल्म "Fantomas" र अभिनेता zhan Mare